မှတ်တမ်းဆိုးတစ်ခုကို ထပ်မံပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြန်တဲ့ မန်ယူနည်းပြ မော်ရင်ဟို
နည်းပြဘ၀တစ်လျှောက် အဆိုးရွားဆုံး အိမ်ကွင်းမှတ်တမ်းနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မော်ရင်ဟို Mourinho
3 Oct 2018 . 4:34 PM
ရလဒ်ဆိုးတွေကြောင့် ဖိအားတွေ များနေတဲ့ မန်ယူအသင်းနည်းပြ မော်ရင်ဟို Mourinho ဟာ အခုဆိုရင် သူ့ နည်းပြဘ၀တစ်လျှောက် အိမ်နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးမှု အချိန်အကြာဆုံးမှတ်တမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။ မန်ယူအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က ဗလင်စီယာအသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အိမ်ကွင်းပွဲ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီး ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့ပါတယ်။ ဒီသရေပွဲကြောင့် မော်ရင်ဟိုရဲ့ မန်ယူအသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲစုံ အိမ်ကွင်း(၄)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီး ဒါဟာ မော်ရင်ဟိုရဲ့ နည်းပြဘ၀တစ်လျှောက် အဆိုးရွားဆုံးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
မန်ယူအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအဖွင့်မှာ လက်စတာကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲနောက်ပိုင်း အိမ်ကွင်းနိုင်ပွဲ ပျောက်ဆုံးနေပြီး စပါးအသင်းကို (၃)ဂိုးပြတ်ရှုံး၊ ၀ုလ်ဗ်ကို (၁)ဂိုးစီသရေ၊ လိဂ်ဖလားမှာ ဒါဘီကို ပယ်နယ်တီနဲ့ ရှုံး၊ အခု ဗလင်စီယာနဲ့ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူအသင်း ပြိုင်ပွဲစုံ အိမ်ကွင်း(၄)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့တာက နည်းပြဟောင်း ဗန်ဟားလ် Louis Van Gaal လက်ထက်မှာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီတုန်းက PSV ၊ ၀က်စ်ဟမ်း၊ ချယ်လ်ဆီးတို့ကို သရေ၊ နောဝစ်ခ်ျကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။ မော်ရင်ဟိုရဲ့ နည်းပြဘ၀တစ်လျှောက် အိမ်ကွင်း(၃)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့တာပဲရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီ ချယ်လ်ဆီးနည်းပြဘ၀မှာ ဆန်းဒါးလန်း၊ အက်သလက်တီကိုအသင်းတွေကို ရှုံး၊ နောဝစ်ခ်ျကို သရေကျခဲ့တယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ ဒီတစ်ပတ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲအဖြစ် နယူးကာဆယ်နဲ့ အိမ်ကွင်းပွဲ ကစားရမှဖြစ်လို့ မော်ရင်ဟိုအနေနဲ့ နိုင်ပွဲ ပြန်ရှာနိုင်အောင် ကြိုးစားရတော့မှာပါ . .
နညျးပွဘဝတဈလြှောကျ အဆိုးရှားဆုံး အိမျကှငျးမှတျတမျးနဲ့ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ မျောရငျဟို Mourinho
ရလဒျဆိုးတှကွေောငျ့ ဖိအားတှေ မြားနတေဲ့ မနျယူအသငျးနညျးပွ မျောရငျဟို Mourinho ဟာ အခုဆိုရငျ သူ့ နညျးပွဘဝတဈလြှောကျ အိမျနိုငျပှဲပြောကျဆုံးမှု အခြိနျအကွာဆုံးမှတျတမျးကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ပွနျပါပွီ။ မနျယူအသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ အင်ျဂါနကေ့ ဗလငျစီယာအသငျးနဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ အိမျကှငျးပှဲ ယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ပွီး ဂိုးမရှိသရကေခြဲ့ပါတယျ။ ဒီသရပှေဲကွောငျ့ မျောရငျဟိုရဲ့ မနျယူအသငျးဟာ ပွိုငျပှဲစုံ အိမျကှငျး(၄)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျဆုံးခဲ့ပွီး ဒါဟာ မျောရငျဟိုရဲ့ နညျးပွဘဝတဈလြှောကျ အဆိုးရှားဆုံးလညျးဖွဈခဲ့တယျ။
မနျယူအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီအဖှငျ့မှာ လကျစတာကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲနောကျပိုငျး အိမျကှငျးနိုငျပှဲ ပြောကျဆုံးနပွေီး စပါးအသငျးကို (၃)ဂိုးပွတျရှုံး၊ ဝုလျဗျကို (၁)ဂိုးစီသရေ၊ လိဂျဖလားမှာ ဒါဘီကို ပယျနယျတီနဲ့ ရှုံး၊ အခု ဗလငျစီယာနဲ့ ဂိုးမရှိသရကေခြဲ့ပါတယျ။ မနျယူအသငျး ပွိုငျပှဲစုံ အိမျကှငျး(၄)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့တာက နညျးပွဟောငျး ဗနျဟားလျ Louis Van Gaal လကျထကျမှာ ဖွဈပွီး ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီတုနျးက PSV ၊ ဝကျဈဟမျး၊ ခယျြလျဆီးတို့ကို သရေ၊ နောဝဈချြကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာပါ။ မျောရငျဟိုရဲ့ နညျးပွဘဝတဈလြှောကျ အိမျကှငျး(၃)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့တာပဲရှိခဲ့ပွီး ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီ ခယျြလျဆီးနညျးပွဘဝမှာ ဆနျးဒါးလနျး၊ အကျသလကျတီကိုအသငျးတှကေို ရှုံး၊ နောဝဈချြကို သရကေခြဲ့တယျ။ မနျယူအသငျးဟာ ဒီတဈပတျ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲအဖွဈ နယူးကာဆယျနဲ့ အိမျကှငျးပှဲ ကစားရမှဖွဈလို့ မျောရငျဟိုအနနေဲ့ နိုငျပှဲ ပွနျရှာနိုငျအောငျ ကွိုးစားရတော့မှာပါ . .